“ကျမတို့နိုင်ငံက (CEDAW) လို့ခေါ်တဲ့ အမျိုးသမီးများအပေါ် နည်းမျိုးစုံဖြင့် ခွဲခြ… – PVTV Myanmar
“ကျမတို့နိုင်ငံက (CEDAW) လို့ခေါ်တဲ့ အမျိုးသမီးများအပေါ် နည်းမျိုးစုံဖြင့် ခွဲခြ…
“ကျမတို့နိုင်ငံက (CEDAW) လို့ခေါ်တဲ့ အမျိုးသမီးများအပေါ် နည်းမျိုးစုံဖြင့် ခွဲခြားဆက်ဆံမှုပပျောက်ရေး သဘောတူစာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအသိအမှတ်ပြု အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ ကျမတို့(မြန်မာနိုင်ငံက) ဒီလက်မှတ်ကိုထိုးကတည်းကိုက အမျိုးသမီးများအပေါ် မခွဲခြား မဆက်ဆံဘူး၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းမဖက်ဘူး၊ ကျားမခွဲခြားမှုအပေါ်မှာမူတည်ပြီး ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုမပြုဘူးဆိုပြီး ကတိကဝတ်ပြုထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီကတိကဝတ်တွေကို စစ်ကောင်စီက ချိုးဖောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်”
အမျိုးသမီး လူငယ်နှင့် ကလေးသူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန
Like – 6.6K Share – 649
ထိေရာက္ေသခ်ာတဲ့ စစ္ေရးအရ အေရးယူရင္ပိုေကာင္းမယ္
ဗြောင်ဗြောင်းတင်တင်ချိုးဖေါက်သော စကစကို ကမ္ဘာလူအဖွဲ့အစည်းကလက်ပိုက်ကြည့်နေရက်တာ လူသားချင်စာနာပါတယ်ဆိုတဲ့အပြောလောက် ၊စာထုတ်ပြန်တာလောက်နဲ့ အလုပ်မဖြစ်ပါ။ စစ်အာဏာရှင်ဟာ စစ်ရေးအရေးယူမှု့ တစ်ရပ်လုပ်မှတာထိရောက်တဲ့အကျိုးရလာဒ်ဖြစ်လာမှာပါ ။ မြန်မာပြည်သူတွေကိုကိုယ်ချင်းစာတရားရှိရင် အမြန်အကောင်အထည်ဆောင်ရွက်စေချင်ပါတယ်။
2021-05-02 at 7:30 PM
2021-05-02 at 7:35 PM
အမျိုးသမီး​ လူငယ်နှင့် က​လေးသူငယ်​ရေးရာပြည်​ထောင်စုဝန်ကြီး ​ဘေးကင်းပါ​စေ၊ ရန်ကင်းပါ​စေ၊ ​ဆောင်ရွက်ချက်များ​အောင်မြင်ပါ​စေ။ ​ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒများ
ပြည့်ဝပါ​စေ။ အမျိုးသမီးများ၊ လူငယ်များနှင့် က​လေးသူငယ်များအ​ပေါ် ကာကွယ်​​စောင့်​ရှောက်ပေးနိုင်ပါ​စေ🙏🙏🙏
2021-05-02 at 7:36 PM
2021-05-02 at 7:38 PM
ဒီတိုက်ပွဲ အောင်မြင်ခဲ့ရင် မင်အောင်လိုင်
ဘီလီယံ နဲ့ချီပိုင်ဆိုင်မူတွေ ဘယ်သူ
ယူမလဲနော် သူတို့သားသမီးတွေပဲ ရမှာလား.
မလအ တယောက်တည်းပိုင်ဆင်တာတောင် ဒေါ်လာ၅ဘီလီယံ​လောက်ရှိတယ်တဲ့
စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မူအားလုံးပေါင်းရင် အနည်းဆုံး ဒေါ်လာ ၁၅ဘီလီယံကနေ ၃၀ဘီယီယံကြားရှိလောက်တယ်
စစ်သား နဲ့ ရဲဆိုတာကိုရွံ့မုန်းပြီး မကြားချင်တော့လောက်အောင်ဘဲ။
အခုလိုလုပ်တဲ့စစ်သားနဲ့ ရဲ မိသားစုမှန်သမျှ သားစဉ်မြေးဆက်အထိတူသောအကျိူးပေး ပါစေ။
2021-05-02 at 7:54 PM
NUG တဖွဲ့ လုံး လည်း ဘေးကင်း လုံခြုံပါစေ။
2021-05-02 at 8:15 PM
ဖမ်းသွားပီးသေသွားတဲ့မိန်းကလေးအပျိုအရွယ်အငယ်လေးတွေရဲ့အလောင်းကို အ​ပြင်ပိုင်ညိုမဲနေအောင်လုပ်ထားကတည်းက မလအ စစ်ခွေးအ. တွေက
2021-05-02 at 8:19 PM
စက်ရုံအလုပ်ကမိန်းကလေးမိန်းမပျိုလေးတွေကို ကာမဆေး သို့မဟုတ် မူးမေ့ဆေးတွေကျွေးပြီး တစ်မျိုး ဒီတိုင်းစကားအာဖြင့် ကာမစော်ကားခံရခြင်စသည် ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် မိန်းကလေးတွေခံခဲ့ရကြောင်းပေါ့
2021-05-02 at 8:33 PM
Ayei Phyoe says:
2021-05-02 at 8:42 PM
ဝန်ကြီးလို့ခေါ်သင့်ပါတယ် အမလို့ပဲခေါ်နေတော့ ရာထူးကိုမလေးစားရာများကျမလားလို့ရှင်
မင်း ကို says:
2021-05-03 at 1:05 PM
Ko Pa Yit says:
2021-05-03 at 6:19 PM
ဟုတ်ကဲ့ UN က နှာစေးနေတယ်ခင်ဗျ
2021-05-03 at 11:18 PM
2021-05-04 at 7:07 AM